Ukuxhaswa kwengqondo - Izilwanyana zezilwanyana zezona ziluncedo lwakho | IBezzia
USusana godoy | 10/10/2021 18:00 | Psicología
Bangabona baphambili kubomi bethu kodwa nakwimpilo yethu. Kuba Izilwanyana zasekhaya ziye zaba yenye yezona zinto zixhasa kakhulu ezengqondo ngenxa yezizathu ezininzi ezahlukeneyo. Ke, kufanelekile ukuba ubazi, kuba ukuba awunazilwanyana ecaleni kwakho, lixesha.
Ukwamkela isilwanyana sasekhaya kuya kuba yenye yezona zinto zibalaseleyo oza kuzenza ebomini bakho. Ayisiyiyo eyokunika ikhaya nothando olungenamiqathango kuphela kodwa iya kuyibuyisela kuwe nangezinye iindlela ezininzi. Lixesha lokuba sazi ukuba kutheni bezizizo ezo zinto zixhasa ingqondo.
1 Inkuthazo yokushiya ikhaya
2 Izilwanyana zasekhaya zisinika inkampani enkulu
3 Ukuxhaswa kwengqondo: Bakhuthaza ukuzithemba
4 Basinceda ukuba sibe noxanduva
5 Nciphisa uxinzelelo
6 Siziva sikhuselekile
Inkuthazo yokushiya ikhaya
Xa sihamba ngendlela embi, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kubiza kakhulu kuthi ukushiya ikhaya. Amazwe oxinzelelo okanye noxinzelelo anokubonakala ebomini bethu ngaphandle kwesilumkiso. Ke ngoko kuyinyani ukuba kukho uthotho lonyango ukuba nje sizibeka ezandleni zeengcali. Kodwa kwelinye icala, izilwanyana zasekhaya ziya kuba zezinye zeenkxaso ezinkulu zengqondo. Ngenxa yokuba unoxanduva kubo, kufuneka baphume endlwini, bathathe amanyathelo abo kwaye bazikhulule. Oku kuyakukhuthaza ukuba uziveze emoyeni nangona kungekho mpumelelo ingako.
Izilwanyana zasekhaya zisinika inkampani enkulu
Olunye uvakalelo ekungekho mntu uvakalelwa kukuba lulolo. Kuba oku kwenza ukuba umntu awele ngokwasengqondweni, athathwe yimvakalelo, enokubangela ukufa. Ke ngoko, izilwanyana zasekhaya ziya kubakho ukunceda xa zifuneka kakhulu. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, xa siphulukana nomntu kwaye sidinga inkxaso, akukho nto injengezilwanyana ezinothando olungenamiqathango..
Ukuxhaswa kwengqondo: Bakhuthaza ukuzithemba
Kutheni le nto ukuzithemba kubalulekile? Kuba kuthanda ukuba nomoya ongcono kwaye, impilo-ntle ngokubanzi. Into ebaluleke yonke imihla kodwa, ukuze sikwazi ukufikelela kuyo yonke into esiyicebisayo. Kodwa ngamanye amaxesha akukho lula kakhulu ukumgcina enathi. Ngoku izilwanyana zasekhaya ziya kunceda kunanini na ngaphambili, kuba siza kubona umsebenzi wenziwe kwaye siya kuziva sonwabile ngokugcina izilwanyana zethu. Oko kusikhokelela ekubeni sizixabise ngakumbi.
Basinceda ukuba sibe noxanduva
Asisoze siyazi eyona nto isincedayo de sibe sinayo phambi kwethu. Ke ngoko, uxanduva lokukwazi ukuba nesilwanyana kufuneka sithathelwe ingqalelo, kuba iyakusinceda yonke imihla. Uya kuhlala uziva ubandakanyeka emsebenzini onje, ngobuhlobo nothando olungenamiqathango. Siya kubanakho ukuba nentando kwaye oku kuyakwenza uxanduva lube lukhulu. Yintoni injongo yako konke oku? Ndiziva ndibhetele kwaye sizakuyifumana ukusuka kumzuzu wokuqala. Kuba enkosi kwisilwanyana sasekhaya, siya kufumanisa iimvakalelo ezintsha esingazaziyo.
Enye yeengxaki ezinkulu esinokuzifumana ebomini namhlanje luxinzelelo. Oku kunikwa yisingqisho sobomi esikhokelayo, ukungakwazi ukufikelela kuyo yonke into kusenza sizive sixinekile. Kodwa ukuba nesilwanyana ecaleni kwethu kuyakwenza ukuba sikubone ngokwahlukileyo. Ke inkampani yakho kuphela eya kusivumela ukuba siphume kolu hlobo lwesifo kwaye sisenze sibe isiqabu okanye ukubuyela ebantwini abanexinzelelo.
Singatsho ukuba eli candelo lifana nesishwankathelo sazo zonke ezadlulayo, okanye uninzi. Kungenxa yokuba nabo siziva sikhatshwa, ukongeza ukukhululeka kuba basusa uxinzelelo, ngokunjalo ziya kusenza sizive sikhuselekile ngalo lonke ixesha. Sinenkampani egqibeleleyo kwaye oku kusenza sicinge ukuba akukho nto imbi iza kwenzeka kuthi. Yiyo loo nto yonke into iluncedo kakhulu kubomi bethu, ewe, kodwa nakwimpilo yethu yeemvakalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Izilwanyana zasekhaya njengenye yeenkxaso ezinkulu zengqondo
Isuphu yerayisi enemifuno yasekwindla kunye nama-mushroom